अनुहारको चाउरी हटाउने घरेलु उपाय « Lokpath
अनुहारको चाउरी हटाउने घरेलु उपाय
एजेन्सी । सुन्दरता कसलाई मनपर्दैन र ! कतिपयलाई प्राकृतिक सुन्दरता नै उत्कृष्ट लाग्छ । त कतिलाई आधुनिक बजारका सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोग गरी सुन्दर बन्ने गर्छन् । सुन्दर बन्नको लागि अनुहारको चायाँ र चाउरी हटाएर मात्र पुग्दैन । समग्र शरीर स्वस्थ हुन आवश्यक हुनुपर्दछ । शरीरको भित्री मांशपेसीहरु भरिलो र पोषिलो भयो भने बाहिरी छाला स्वतः भरिलो हुन्छ, स्वस्थ बन्छ । जसको लागि प्राकृतिक जीवन जिउनु उपयुक्त हुन्छ कि त प्राकृतिक खानपानमा ध्यन दिनुपर्दछ अनुहारमा चमक ल्याउन र चाउरीपन हटाउन कुनै पनि सौन्दर्य श्रृंगारगृह गइरहनुपर्छ भन्ने छैन । हामी, हाम्रै घरआँगनको प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसाधन तथा पोषण तत्वको खाद्यपूरक वारे अनभिज्ञ छौं । धेरै नेपालीको घरघरमा पाइन्, देखे जानेको एलोभेरा अर्थात घिउकुमारी नै सुन्दर त्वचा र अनुहारको चाउरीपन हटाउने सौन्दर्य प्रसाधन मात्र होइन विभिन्न रोगको प्रतिरोधी चामत्कारिक खाद्यपूरक समेत भएको खाद्यविज्ञहरुको दाबी छ एलोभेरा (घिउकुमारी) ६० देखि १ सय सेन्टिमिटर अग्लो रसदार बिरूवाको प्रजातिमा पर्छ । यसको उत्पत्ति एशिया र आफ्रिकाको सुक्खा क्षेत्रहरूमा भएको थियो, तर हाल संसारैभरी पैmलिएको छ । यसका पातहरू बाक्ला र गुदियुक्त हरियो वा खैरो मिश्रित हरियो रंगका हुन्छन्, जसमा बाक्लो लेदो (जेल) जस्तो पदार्थ हुन्छ । पातका किनारहरूमा साना सेता दाँती भएका धारहरू हुन्छन् । गाउँघरमा छिप्पिएको पातभित्रको गुदीलाई घिउसँग मिसाएर पोलेको घाउमा लगाउने चलन छ । कतिपयले एलोभेराको गुदीलाई अनुहारमा दलेर फेसवासको रुपमा प्रयोग गर्ने समेत गरेको पाइन्छ पौष्टिक खाद्य वस्तु, जडिबुटीजन्य औषधि र सौन्दर्य प्रसाधनका रूपमा एलोभेरालाई ईश्वी सम्बत्को पहिलो शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै प्रयोग गर्न थालिएको अभिलेख छ । यसमा निहित पीडा न्यूनीकरण गर्ने, रोगहरू निको पार्ने र कोषहरूको पुनर्निर्माण गर्ने तथा प्रतिकूल प्रभाव वा साइड इफेक्ट नहुने गुणहरूले गर्दा नै वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरूले यसको व्यापक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसमा बहुभिटामिनहरू, खनिज पदार्थहरू लगायतका २ सयभन्दा धेरै क्रियाशील पदार्थहरू हुनाले यो पोषण र विभिन्न औषधीय गुणयुक्त चामत्कारिक खाद्य पूरक बनेको हो घिउकुमारी –एलोभेरामा मेक्रोन्युट्रियन्टस् (बृहद्पोषकहरू) : कार्बाेहाइड्रेट, वनस्पतिजन्य स्टेरोलहरू, एमिनो एसिडस् आदि, माइक्रोन्युट्रियन्टस् (सुक्ष्मपोषकहरू) : भिटामिन ए, बी१, बी२, बी३, बी६, बी१२, सि र इ, तथा फोलिक एसिड, फलाम, केल्सियम, मेग्नेसियम, जिङ्क, क्रोमियम, सेलेनियम, तामा, मेङ्गानिज, सोडियम आदि, फाइटोकेमिकल्स (वनस्पतिजन्य यौगिकहरू) : पोलिसेक्राइडस्, एन्टिअक्सिडेन्टस्, मात्राज, एन्थ्राक्विनोनस्, सि–ग्लाइकोसाइडस्, एन्थ्रोन्स, विविध प्रकारका लेक्टिन आदि तत्वहरु सक्रिय पाइन्छ एलोभेरा (घिउकुमारी) को फाइदाहरू
शारिरिक प्रक्रियालाई सुगठित र क्रियाशील बनाउँछ ।
कोषलाई निर्विषीकरण गर्छ तथा काटेका र पोलेका घाउको पीडा कम गरी निको पार्न मद्दत गर्छ ।
तागत दिन्छ र शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ ।
दुखाई, ज्वरो र तनावलाई न्यूनीकरण गर्छ ।
पाचन प्रक्रियालाई सुदृढ पार्छ र मधुमेहको उपचार तथा रोकथाम गर्न मद्दत गर्छ ।
कोलेस्टेरोल र मुटु रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्छ ।
छाला, यौन अंग र आँखाका रोग र संक्रमणहरू विरूद्ध लड्न र तिनीहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
छालालाई सुन्दर बनाउन र चाउरी हटाउन सहयोग गर्छ ।
एलोभेरा (घिउकुमारी) प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सवाधानीगर्भवती, रजस्वलाको अवस्थामा, रक्तश्राव भइरहेको बेला, कलेजो र पित्ताशयमा समस्या भए एलोभेरा सेवन नगर्नु उचित हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको विशेषता र प्रकृति अलग अलग हुनेहुनाले सेवन गर्ने क्रममा एलोभेराको मात्रा स्वतः निर्धारण हुने भए पनि सावधानी र मात्राका लागि विज्ञ–चिकित्सक–खाद्यपूरक विशेषज्ञसित परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,३०,आईतवार १०:४७
हामीले बिर्सेको त्यो असार १५ !
काठमाडौं । असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । अझ दिवस विशेषभन्दा पनि नेपाली कृषकहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व । ‘मानो
प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै साफमा सहभागिताका लागि पाकिस्तानको छलफल सुरु
भक्तपुरमा सवारी दुर्घटनाबाट युवतीको मृत्यु
बस्यो मन्त्रिपरिषद् बैठक
सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी
नवनियुक्त मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
बढ्यो कोरोना जोखिम : एकैदिन ९० जनामा संक्रमण
मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले दिए यस्ता सुझाव